News Collection: क्यासिनोमा माओवादी मोह
क्यासिनोमा माओवादी मोह
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा माओवादीले आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी पार्टी दाबी गर्दै अरुलाई पुँजीवादीको बिल्ला भिराउने गरेको छ। तर पुँजीवादको विकसित रूप जुवा संस्कृतिलाई बचाउन भने त्यही 'क्रान्तिकारी' पार्टी लागेको देख्दा लाग्छ– नेपालमा पुँजी संस्कृति भित्र्याउनु गणतन्त्रको लक्ष्य हो। कतिसम्म भने माओवादीले करोडौं राजस्व नतिरेकोमा क्यासिनोको महाप्रबन्धक पक्राउ पर्दा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध मात्र गरेन प्रहरीविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेको छ।
नेपालीलाई क्यासिनोमा प्रवेश दिएको र सरकारलाई तिनुपर्ने रोयल्टी नतिरेकोमा प्रहरीले धमाधम क्यासिनोका महाप्रबन्धक पक्राउ गर्न थालेपछि माओवादी आत्तिएको छ। पार्टी संचालनको प्रमुख स्रोत बन्दै आएको क्यासिनो बन्द हुने डरले माओवादीलाई सताएको छ। किनकि माओवादीले क्यासिनोबाट करोडौं रुपैयाँ मासिक रूपमा लिने गरेको मात्र छैन, आफ्ना तीन हजारभन्दा बढी कार्यकर्तालाई क्यासिनोमा जागिर समेत खुवाएको छ। त्यसकारण सयौं नेपालीको घरबारी सिध्याएको क्यासिनोको संरक्षणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै चासो देखाएका छन्। नेपालका चार वटा क्यासिनोका मालिक भारतीय नागरिक राकेश बाध्ा्वालाई जोगाउन प्रचण्ड नै लागेको प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ। बाधवासँग माओवादी साइनो कुनै यस्तो जमाना थियो, जतिबेला माओवादीको डरले गाउँघरमा जुवा तासको लगभग अन्त्य भएको थियो। किनकि जुवातास खेलेको भेटेमा तास पत्ती नै खान लगाएर माओवादीे भाटे कारबाही गर्ने गर्दथ्यो। जुवातासले मानिसलाई बिगार्छ भन्ने माओवादी धारणा थियो। तर अहिले परिस्थिीति यसरी परिवर्तन भएको छ कि क्यासिनोमा जुवा खेलेर सयौं नेपालीलाई घरबारविहीन बनाएका भारतीय नागरिक राकेश बाधवा माओवादीका सबैभन्दा प्रिय व्यवसायी बनेका छन्। आखिर शान्तिप्रक्रियामा आएको यो छोटो अवधिमै माओवादीको बाधवासँग कसरी साइनो गाँसियो त? घटनाक्रम निकै रमाइलो छ। पहिले अमेरिकी नागरिक आरडी टटल, जो क्यासिनोका लगानीकर्ता हुन्, बाधवा उनै टटलका कर्मचारी थिए। पहिले टटलका सबैभन्दा विश्वासपात्र कर्मचारी पनि थिए बाधवा। त्यही कारण विश्वास गरेर टटलले उनलाई नेपालको एभरेष्ट क्यासिनोको १० प्रतिशत हिस्सा उनलाई दिएका थिए। तर धूर्त स्वभावका बाधवाको त्यसबाट महत्वांकाक्षा बढ्दै गयो। त्यही महत्वाकांक्षाले उनीहरूबीच दरार सुरु भएको थियो। विभिन्न जालझेल गरी बाधवाले नेपालका सबै क्यासिनो आफ्नो भएको दाबी गर्न थाले र उनीहरूबीचको द्वन्द्वले चरम रूप लियो। यहीबीचमा टटल र बाधवा दुवै राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नतर्फ लागे। टटर सत्ताधारी दलतर्फ लागे भने बाध्वा क्यासिनोमा कब्जा जमाउँदै गरेका कर्मचारीको माध्यमबाट माओवादी नेतृत्वमा पुगे र कर्मचारीलाई हातमा लिएर उनले झन्डै दुई वर्षअघि क्यासिनो कब्जामा लिए। यसको जति फाइदा बाधवालाई भयो त्योभन्दा बढी माओवादीलाई। त्यतिखेर एभरेष्ट, तारा, रोयल, अन्ना, र्यामड र क्यासिनो नेपाल गरी बाधवाको पाँच वटा क्यासिनो राजधानीमा संचालन भएका थिए। ती सबै क्यासिनोमा त्यसपछि माओवादीले करिब ३ हजार कर्मचारीलाई जागिर दियो। क्यासिनो कब्जा गर्न माओवादीले सहयोग गरेको हुनाले बाधवाले पनि माओवादी नेताले सिफारिस गरेअनुसार कर्मचारी नियुक्ति गरे। क्यासिनोबाट दैनिक नै करोड भन्दा बढी कमाइ हुने भएपछि बाधवाले माओवादीले भनेअनुसार कर्मचारी नियुक्ति गरेका हुन्। त्यस क्रममा सबैजसो केन्द्रीय नेताले आफ्ना आफन्तलाई क्यासिनोमा जागिर खुवाए। अखिल नेपाल मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेल तथा अखिल नेपाल होटल मजदुर संघका अध्यक्ष रमेश पन्त लगायतका मजदुर नेताका श्रीमती नै हाल क्यासिनोमा कार्यरत छन्। जागिरमा मात्र माओवादीको बाधवासँग सम्बन्ध रहेन। माओवादीको पार्टी सञ्चालनमा नियमित रूपमा करोडौं रूपैयाँ पनि उनले दिन थाले। त्यतिमात्र होइन माओवादी नेताहरूका लागि मदिरा र अन्य खान्कीसमेत क्यासिनोबाट पुग्न थाल्यो। नियमित रूपमा मदिरा सेवन गर्ने गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत माओवादीका मजदुर नेताहरूले गोप्य रूपमा क्यासिनोबाट नै उच्चकोटीका आयातित मदिरा पुर्या उने गर्दछन्। बाधवालाई माओवादी लाइनमा ल्याउन भने नेता जमरकट्टेको ठूलो हात रहेको छ। जमरकट्टेल पक्षले क्यासिनोबाट लाखौं रूपैयाँ नियमित रूपमा लिने गरेको मजदुर संगठनकै महासचिव बद्री बजगार्इं पक्षले पटकपटक आरोप लगाउँदै आएका छन्। माओवादीमा कसरी आर्थिक तथा वैचारिक भ्रष्टीकरण मौलाउँदै गएको छ भन्ने कुरा यही क्यासिनो काण्डबाट प्रस्ट हुन्छ। हाल क्यासिनोको महाप्रबन्धक पक्राउ पर्दा छुटाउनका लागि माओवादी नेताहरू नै कम्मर कसेर लागिरहेका छन्। यही १४ पुसमा माओवादी निकट होटल मजदुर संगठन अखिल नेपाल होटल तथा रेष्टुराँ मजदुर संघले निकालेको पे्रस विज्ञप्तिलाई हेर्ने हो भने पनि माओवादीका लागि क्यासिनो कति प्यारो भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'क्यासिनोको पछाडि यो सरकार लाग्नुको कारण के हो? सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको बक्यौता क्यासिनोको मात्र हो कि अरु उद्योग व्यवसायीको पनि छ?' सरकारलाई गाली गर्दै माओवादीले यसरी क्यासिनो संचालकको पक्ष लिनुले उसको वास्तविकता छर्लङ्ग भएको छ। विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, 'राजनैतिक पूर्वाग्रहका साथ यदि यो सरकार लागेको हो भने हामी त्यो कथित सपना चकनाचुर पार्न कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार छौं।' क्यासिनो ताराका महाप्रबन्धक मनोज सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकै दिन माओवादीले यस्तो विज्ञप्ति निकालेको हो। एक महिना अघि प्रहरीले क्यासिनो संाग्रिलाका महाप्रबन्ध हर्कबहादुर ऐरलाई पनि पक्राउ गरी हाल अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको छ। यसरी एकपछि अर्काे गर्दै क्यासिनोका महाप्रबन्धकहरू पक्राउ पर्न थालेपछि माओवादीको चिन्ता बढेको हो। प्रहरीले बाधवाले संचालन गरेका सबै क्यासिनोका महाप्रबन्धकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। हाल बाधवाको कम्पनी नेपाल रिक्रियसन सेन्टरको मातहतमा ६ वटा क्यासिनो रहेका छन्। क्यासिनो नेपाल, क्यासिनो अन्ना, क्यासिनो एभरेष्ट, क्यासिनो र्यािड, क्यासिनो तारा र पोखरामा क्यासिनो पोखरा छन्। यसअघिका क्यासिनो सांग्रिला र रोयल क्यासिनो भने उनको हातबाट फुत्किसकेको छ। सांग्रिला होटलले क्यासिनो संाग्रिला बाधवाबाट खोसर मलेसियन व्यापारीलाई दिइसकेको छ भने रोयल क्यासिनो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहले लिएका छन्। अन्य क्यासिनोको पनि उनले होटललाई तिर्नुपर्न भाडा नतिरेकाले उनलाई हटाउने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ। पक्राउ पुर्जी जारी भएका बाधवा हाल भारतमै छन्। क्यासिनोको चिन्ता भने बाधवालाई भन्दा बढी माओवादी नेताहरूमा देखिएको छ। बाधवा निकट एक स्रोत बाधवाको विश्वासपात्र रहेकी सांग्रिला क्यासिुनोकी महाप्रबन्धक नैला बिष्टले राजीनामा दिएपछि उनको खराब दिन सुरु भएको बताउँछ। गत १५ अगष्टमा बिष्टले राजनीनामा दिएकी थिइन्। स्रोतका अनुसार प्रहरीदेखि राजनीतिक दलसम्म उनलै नै 'डिल' गर्ने गरेकी थिइन्। तर उनले छोडेपछि बाधवालाई समस्या भएको हो। बिष्टको ठाउँमा गोवाको क्यासिनोबाट बाधवाले हर्क ऐरलाई त्यहाँको जिम्मेवारी दिएका थिए तर ऐर पक्राउ परेपछि बाधवाका सबै क्यासिनो संकटमा परेका छन्। एकातर्फ नेपाली छिर्न प्रहरीको कडाइले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने चिन्ता अर्काेतर्फ सरकारको पक्राउ पुर्जी। यी दुई कारण अहिले क्यासिनो संकटमा परेका हुन्। नेपालीलाई नेपालका क्यासिनोमा जुवा खेल्न मनाही छ। विदेशीलाई मात्र सरकारले क्यासिनोमा जाने सर्तमा क्यासिनो खोलेको हो। तर माओवादीहरू भने प्रहरीले नेपालीलाई क्यासिनो छिर्न कडाइ गर्दा आफ्नो जागिर जाने भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छन्। एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्,'कानुनको पालना गराउँदा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी आन्दोलन गर्छु भन्छ भने त्यो भन्दा लाजमर्दाे कुरा के हुन्छ?'